1 Timoteo 1 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Timoteo Nhoma a Edi Kan 1:1-20
Ɔbɔɔ no kɔkɔ wɔ akyerɛkyerɛfo atorofo ho (3-11)
Wɔdom Paul (12-16)
Mmeresanten hene (17)
‘Ko ɔko pa no’ (18-20)
1 Me Paul a yɛn Agyenkwa Nyankopɔn ne Kristo Yesu a ɔyɛ yɛn anidaso no ayi me sɛ Kristo Yesu somafo no,+ 2 mede krataa yi rekɔma Timoteo*+ a ɔyɛ me ba paa+ wɔ gyidi no mu no: Agya Nyankopɔn ne yɛn Awurade Kristo Yesu adom ne mmɔborɔhunu ne asomdwoe nka wo. 3 Bere a merebɛkɔ Makedonia no, mesrɛɛ wo sɛ tena Efeso. Saa ara na seesei nso meresrɛ wo sɛ tena hɔ, sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛma ebinom ate wɔn ho ase sɛ, ɛnsɛ sɛ wɔkyerɛkyerɛ nkyerɛkyerɛ foforo, 4 na ɛnsɛ sɛ wotie atosɛm+ ne abusua santen ho nsɛm. Saa nneɛma no, mfaso biara nni so.+ Nea ɛde ba ara ne akekakeka; ɛmma yennya biribiara a ɛhyɛ gyidi den mfi Onyankopɔn hɔ. 5 Nea ɛwom ne sɛ, akwankyerɛ* a mede ama yi, adwene a ɛwɔ akyi ara ne sɛ yebefi koma a emu tew, ne ahonim* pa, ne gyidi+ a nyaatwom nnim mu ada ɔdɔ adi.+ 6 Ebinom aman afi eyinom ho, enti nsɛnhunu+ na wɔkeka. 7 Wɔpɛ sɛ wɔkyerɛkyerɛ+ mmara, nanso nsɛm a wɔka no, wɔnte ase, na nea wogye gyina mu denneennen no nso, wɔnte ase. 8 Yenim sɛ, sɛ obi de Mmara no yɛ adwuma yiye* a, ɛnde na Mmara no yɛ papa. 9 Nanso ɛsɛ sɛ ɔkae sɛ, ɛnyɛ atreneefo nti na wɔhyɛ mmara, na mmom wɔhyɛ mmara ma mmaratofo+ ne atuatewfo, amumɔyɛfo ne abɔnefo, wɔn a wodi afoforo huammɔ* ne wɔn a wɔmfa nneɛma kronkron nyɛ hwee, wɔn a wokum wɔn papanom ne wɔn a wokum wɔn maamenom, awudifo, 10 aguamammɔfo,* mmarima a wɔne mmarima da, wɔn a wɔkyere nkurɔfo sie, atorofo, wɔn a wɔka ntam hunu,* ne biribi foforo biara a etia nkyerɛkyerɛ pa*+ no. 11 Anuonyam asɛmpa a efi anigye Nyankopɔn no nkyɛn a wɔde ahyɛ me nsa+ no, ɛno na saa nkyerɛkyerɛ pa no gyina so. 12 Meda yɛn Awurade Kristo Yesu a ɔhyɛɛ me den no ase, efisɛ wabu me ɔnokwafo de ɔsom adwuma bi ahyɛ me nsa.+ 13 Ɛwom, bere bi a atwam no mekekaa abususɛm, metan nkurɔfo ani, na meyɛɛ aniammɔnho.+ Nanso wohuu me mmɔbɔ, efisɛ na minnim nea mereyɛ, na gyidi a na minni nti na meyɛɛ saa. 14 Nanso yɛn Awurade adom dɔɔso boroo so, na na gyidi ne ɔdɔ a ɛwɔ Kristo Yesu mu nso ka ho. 15 Saa asɛm yi yɛ nokware, na ɛsɛ sɛ yegye tom paa. Ɛne sɛ: Kristo Yesu baa wiase sɛ ɔrebegye abɔnefo nkwa.+ Na mene ɔbɔnefo a ɔsen abɔnefo nyinaa.+ 16 Nanso, wohuu me mmɔbɔ sɛnea ɛbɛyɛ a, me a mesen abɔnefo nyinaa no, Kristo Yesu bɛfa me so ayi n’abotare nyinaa adi, na ɔde me ayɛ nhwɛso ama wɔn a wobegye no adi na wɔanya daa nkwa+ no. 17 Afei, mmeresanten Hene,+ nea ɔmporɔw,+ nea wonhu no,+ Onyankopɔn koro pɛ no,+ ɔno na nidi ne anuonyam nka no daa daa. Amen. 18 Me ba Timoteo, mede akwankyerɛ* yi rema wo, sɛnea wo ho nkɔm a wɔhyɛe no kyerɛ no, na nkɔmhyɛ no aboa wo ama woakɔ so ako ɔko pa no.+ 19 Bere a woreko ɔko pa no, kura gyidi ne ahonim pa+ mu. Ɛno na ebinom apia ato nkyɛn ama wɔn gyidi asɛe te sɛ po so hyɛn a abɔ. 20 Wɔn mu bi ne Himeneo+ ne Aleksandro, na mede wɔn ama Satan+ sɛnea ɛbɛyɛ a nteɛso bɛma wɔasua sɛ wɔrenkeka abususɛm.
^ Ɛkyerɛ, “Nea Ɔhyɛ Onyankopɔn Anuonyam.”
^ Nt., “sɛnea mmara hwehwɛ.”
^ Anaa “wɔn a wonni ɔdɔ a enni huammɔ.”
^ Anaa “wɔn a wɔka ntam a, wonni so.”
^ Anaa “nkyerɛkyerɛ a mfaso wɔ so.”